Tsy fifamendrofendroana izao… | NewsMada
Tsy fifamendrofendroana izao…
Mbola misy ihany, sanatria, ny hopitaly tsy mandray marary amin’izao ady amin’ny fihanaky ny Covid-19 izao? Na sendra izay tsy misy intsony ny toerana handraisana marary. Etsy an-daniny, misy ny olona mikoropaka loatra: mamonjy dokotera tsy miankina avy hatrany, raha vao tsy metimety.
Misy tokoa ny marary manatona mpitsabo tsy miankina, ary ny manaraka fitsaboana avy hatrany amin’izany; eny, tsy miandry na tsy manao fitiliana akory aza. Raha misy, sanatria, ny soritr’aretina mazava na fisehoan’aretina ao anatin’ny fahasarotana vao alefan’ny mpitsabo eny hopitaly avy hatrany.
Amin’izany, tsy hita be ihany ny tarehimarika amin’izay tena isan’ny marary na sitrana, ankoatra izay ofisialy. Tsy izay ny olana. Ny tsy azo lavina, tena mihanaka ny valana­retina Covid-19: mampatahotra be. Izay no mampikoropaka ny olona amin’ny toe-pahasalamany. Izao vao resy lahatra?
Tena misy ary mihanaka ny tsimokaretina Coronavirus tsy hita maso, mora mifindra, tsy mifidy olona, mamotika sy manala aina… Tsy azo sangiana izany, tsy maintsy atrehina sy iadiana. Tsy misy afa-tsy ny fiarovan-tena aloha no fanafihana tsara sy mahomby ary azo antoka indrindra amin’izao.
Ekena, misy ny fanefitra sy fanafana. Saingy samy ma­nana ny toe-tenany ny isam-batan’olona, indrindra amin’ny fananana hery fiarovana sy ny mety ho fisehoan’aretina, raha sanatria, idiran’ny tsimokaretina. Izay no itandremana amin’ny antsipiriany sy manontolo ny fiarovan-tena amin’izao.
Fiarovana ny hafa ny hoe fiarovan-tena, nefa efa mi­paritaka amin’ny alalan’ny rivotra ny tsimokaretina. Izany no anisan’ny mampirongatra ny valanaretina, indrindra ho an’ny faritra Analamanga? Mila maody izay tsy te harary sy te ho velona. Tsy fotoana ifampitsarana na ifanomezan-tsiny izao.
Samia manao izay efany sy afany amin’ny fiarovan-tena, na fiarovana ny tena koa aza ny fiarovan-tenan’ny hafa. Halohalika ny ranom-bary? Na efa hatenda aza… Tsy maintsy miady ny tena, tsy maintsy mandresy. Raha tsy izany, aoka re… Ny ady izao no atrehina fa tsy fifamendro­fendroana.